Ku xidhnaanta ilmahaaga | Zanzu
Xidhiidhka u dhexeeya hooyada iyo ilmahu waxay ku kobocdaa si dabiic ah muddada uurka.
Hooyada iyo ilmahu si kedis ah ayay uga jawaab celiyaan ishaarooyinka midba ka kale. Ilmahu waxa uu aqoonsadaa urta iyo garaaca wadnaha hooyadii.
Maalin kasta hooyadu waxay fahantaa si wanaagsan waxa ilmahu u baahanyahay. Tusaale ahaa: sababtee isaga /iyadda way oydaa ama marka isaga /iyaddu ay gaajoonayso.
Naas nuujinta waxay ka caawisaa in la xoogeeyo xidhiidhka u dhexeeya hooyada iyo ilmaha. Si kastaba ha ahaatee, hooyooyinka aan naas nuujin sidoo kale waxay dabiici ahaan isugu xidhmaan si dabiici ah oo fudud ilmahooda.
Aabbayaashana, aad ayay u adkaan kartaa in la sameeyo xidhiidh xoogan. Laakiin aabbayaasha, sidoo kale, waxay xoojin karaan xidhiidhkooda ay la leeyihiin ilmahooda. Waxay karaan, tusaale ahaan:
Inay ku quudiyaan dhalo ilmaha caanaha naaska ama caano boodhaha caanaha ilmaha.
U qubee ilmaha;
ku qaad ilmaha xambaar.
Daqiiqadahan isku dhowaanshaha waxay muhiim u yihiin aabbaha iyo ilmaha. Sidoo kale machaneedu waxa weeye in hooyadu ay nasan karto wakhti ilaa ka kale.
Noqoshada waalidka waa nidaamka barashadda. La hadal qoyskaaga, saaxiibada, waalidka kale iyo dhakhtarkaaga guud ama ummulisada. Way ku caawin karaan oo talo ku siin karaa. Sidoo kale la hadal lamaanahaaga wax ku saabsan waxa aad labbadiinuba doontaan oo aad u baahantahay.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Ku xidhnaanta ilmahaaga